Okujwayelekile - Iforamu yeKalimba
Lesi sihloko sanoma yini ehlobene neKalimbas.
Ikhasi 1 / 5 1 2 3 4 5 Olandelayo
Inqubomgomo Yemfihlo + Inqubomgomo Yamakhukhi
Imithetho Yesithangami Nemihlahlandlela + Isaziso Sezomthetho | Kugcine ukubuyekezwa ngomhlaka 14 kuDisemba 2020
Ifuna incwadi yekalimba yezandla ezimbili
imisindo, Izinyanga ezingu-8 ezedlule
Ukubhaliswa kwe-1.1K nokubukwa kwe-125K!
Khyla andrea, Izinyanga ezingu-9 ezedlule
I-kalimba entsha, ishidi elisha lokukopela
UFrankV, Izinyanga ezingu-9 ezedlule
Isipiliyoni nge-Hokema B17?
undlunkulu, Izinyanga ezingu-9 ezedlule
Ama-Subs ajabulisayo we-1K nokubukwa okungu-100K!
Khyla andrea, Izinyanga ezingu-10 ezedlule
JADAMZ, Izinyanga ezingu-10 ezedlule